Baarlamaanka Puntland oo diiday wakhti kordhin uu Madaxweynaha u sameeyay masuuliyiinta maxkamada sare - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo diiday wakhti kordhin uu Madaxweynaha u sameeyay masuuliyiinta maxkamada sare
July 20, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Golaha baarlamaanka dowlada Puntland. Sawirka: Archives.
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka dowlada Puntland ayaa kasoo horjeestay wakhti kordhin uu Madaxweynaha u sameeyay masuuliyiinta maxkamada sare Puntland.
Golaha oo ku guda jira kala-fadhigooda 37-aad ee ka socda caasimada Puntland, Garoowe ayaa maanta cod u qaaday muddo kordhinta Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali u sameeyay masuuliyiinta maxkamada sare, golaha baarlamaanka ayaa cod aqlabiyada ku diiday muddo kordhinta masuuliyiinta maxkamada sare.
Madaxweynaha ayaa dhawaan muddo afar bilood ah u kordhiyay masuuliyiinta maxakamada sare Puntland oo dhawaan wakhtigoodii dhamaaday.
Sida uu dastuurka dowlada Puntland qeexayo, Madaxweynaha ayaa awood u leh inuu markale tigreedo ku celiyo golaha baarlamaanka si ay cod ugu qaadaan, isaga oo ku lifaaqaya sababaha keenay inuu markale baarlamaanka dib ugu cesho digreetada muddo kordhinta.
Masuuliyiinta maxkamada sare Puntland ayaa ka kooban shan xubnood oo kala ah, guddoomiyaha, ku-xigeenkiisa iyo saddex garsoore.
Ugu dambayna Madaxweynaha ayaa awood u leh soo magacaabida masuuliyiinta maxkamada sare dowlada Puntland.
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiir Dowlihii Madaxtooyada Puntland Maxamed Xasan Ciise ayaa maanta oo Sabti ah ku geeriyooday magaalada Garoowe kadib markii uu ku dhacay xanuunka coronavirus. Waxa uu noqonayaa xubintii labaad ee katirsan golaha wasiiradda oo [...]